आयुष्मानलाई सानो मनले के दियो ? « Mazzako Online
नायक आयुष्मानले देशराज जोशी अभिनित चलचित्र सानो मन रिलिज भएको छ । चलचित्रको प्रिमियरमा फिल्म रुचाईएको थियो । आयुष्मानले पनि अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अभिनयको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छन् । उनको र शिल्पाको जोडीलाई रुचाईएको छ । राम्रो प्रतिकृया पाएर आयुष्मान मख्ख त बनेका छन् तर उनको करियरलाई यो चलचित्रले के फाईदा गर्‍यो त ?
चलचित्र हेर्नेले त उनको कामको तारिफ गरे । फिल्ममा राखिएको उनलाई वास्तविक जीवनमा पनि व्यङ्ग गर्ने सम्बाद चुसेको आँप झनै चर्चित पनि भयो । तर, आयुष्मानलाई नोटिस गरेका र चिनेका बाहेक धेरै माझ अझै उनी अनबिज्ञ नै छन् ।
उनको फिल्म हेर्न दर्शक आतुर थिएनन् र गएनन् पनि । उनलाई पहिल्यै बाट एउटा ट्याग लागेको छ, प्रियंकाको प्रेमी । उनी नायिका प्रियंका कार्कीको प्रेमी भनेर धेरै चिनिएका छन् । सानो मनले उनलाई राम्रो कलाकार भनेर त चिनायो तर, फिल्म हेर्ने दर्शकलाई पो यो कुरा थाहा भयो त, अरुको लागि त उनी अझै प्रियंका कै प्रेमी न हुन् ।
धेरै मेहनत गरेर काम गरेको सानो मनले औसत ब्यापार गर्दा आयुष्मान केही खिन्न त होलान् तर उनले पाएको प्रतिकृयाले भने मख्ख नै छन् ।
सौगात र सृष्टिको ‘सँगसँगै’ को शुभमुर्हत
प्रेम र गीतको बाल्यकालको लुक्स सार्वजनिक
‘माछा माछा’ र ‘माया पिरिम’ रिलिज
के अनमोल अवार्डका लोभी भएका हुन् ?